खुशीको खबर ! आज सुनको मूल्यमा भरि गिरावट, चाँदीको मूल्य पनि घट्यो – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/खुशीको खबर ! आज सुनको मूल्यमा भरि गिरावट, चाँदीको मूल्य पनि घट्यो
खुशीको खबर ! आज सुनको मूल्यमा भरि गिरावट, चाँदीको मूल्य पनि घट्यो
साताको तेस्रो दिन आज (मंगलबार) सुनको मूल्य तोलामा रु २०० ले घटेको छ । यस्तै चाँदीको पनि रु ५ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन मंगलबार तोलामा ७० हजार ८०० मा कारोबार भएको छ ।
यस्तै तेजावी सुन तोमलामा ७० हजार ५०० मा कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदी भने तोलामा रु ८३० मा कारोबार भएको छ । नेपाली बजारमा सोमबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै चाँदी भने अघिल्लो दिनको तुलनामा हिजो (सोमबार) ८३५ मा कारोबार भएको थियो ।
यी हुन् चर्चित अभिनेता, लेखक, संगीतकार तथा टेलिभिजन प्रस्तोता रिचर्ड ओ ब्रायन जसलाई झट्ट हेर्दा पुरुष हो कि महिला हो भनेर छुट्ट्याउन गाह्रो पर्ने गर्छ । सन् १९७३ मा उनले एक सांगीतिक स्टेश शो ‘द रकी हरर शो’ लेखेका थिए । यो प्रस्तुति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै निकै चर्चित बनेको थियो । उक्त शो पश्चात् उनको छुट्टै पहिचान स्थापित भएको थियो ।
सांसद चौधरी कलेज गएपछि, कलेजमा विद्यार्थीहरुले यस्तो सम्म गरे …
नेपालमा लक्षणसहितका कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै, सास फेर्न गाह्रो हुने मानिस धेरै भेटिए
कतारमा आज थप तीन जनामा कोरोना भाइरस